ထရမ့်လက်ထက် ယူအက်စ်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီများ အတိုင်းမသိပျက်စီးခဲ့ရဟု ဘိုင်ဒန်ဆို ( ထရမ့်က သမ္မတ သက်တမ်းမကုန်သေးဘူး သမ္မတအဟောင်းနဲ့ သမ္မတလောင်းတို့ စပြီး အပြစ်ဖို့နေကြပြီ….) – New Of Burmese
ထရမ့်လက်ထက် ယူအက်စ်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီများ အတိုင်းမသိပျက်စီးခဲ့ရဟု ဘိုင်ဒန်ဆို ( ထရမ့်က သမ္မတ သက်တမ်းမကုန်သေးဘူး သမ္မတအဟောင်းနဲ့ သမ္မတလောင်းတို့ စပြီး အပြစ်ဖို့နေကြပြီ….)
အမေရိကန်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အေဂျင်စီတွေဟာ သမ္မတထရမ့်လက်ထက်မှာ ဧရာမပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ခံ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ သူ့ရဲ့လက်ထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဘိုင်ဒန်က အခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာ အာဏာအလွှဲအပြောင်းလုပ်ရာမှာ ကာကွယ်ရေးဌာနအပါအဝင် လုံခြုံရေးဌာနတွေကနေ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ မရရှိခဲ့ဘူးလို့ ဘိုင်ဒန်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘိုင်ဒန်ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှာ သမ္မတတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီး သမ္မတထရမ့်ကလည်း နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာ သူအရေးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်နေဆဲပါ။
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာတဲ့အထိ ပုံမှန်အားဖြင့် သမ္မတအပြောင်းအလဲကာလမှာ ရရှိရမယ့် အဓိကထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေ ရရှိဖို့ ပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်က ဘိုင်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက် ယာယီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ခရစ္စတိုဖာ မီလာက သူ့အရာရှိတွေဟာ အကူးအပြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ပရိုဖက်ရှင်နယ်ပီပီသသ လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့အဖွဲ့က ကနဦးတောင်းဆိုထားတာထက် အများကြီးကျော်လွန်ပြီး ကာကွယ်ရေးဌာနက ဝန်ထမ်း ၄၀၀ ကျော်က တွေ့ဆုံမှုပေါင်း ၁၆၄ ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့သလို စာမျက်နှာ ၅၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ အထောက်အထားတွေလည်း ပံ့ပိုးခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပင်တဂွန်ပြောခွင့်ရသူတစ်ဦးကလည်း ဘိုင်ဒန်အဖွဲ့နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ကတော့ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဓိကအချက်တွေကို ထွက်ခွာတော့မယ့်အစိုးရဆီက မရတာမို့ ထရမ့်အစိုးရဟာ တာဝန်မဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးမှုကိုမဆို အမေရိကန်ရန်သူတွေက အသုံးချနိုင်တာကြောင့် ကမ္ဘာတဝန်းက အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အနေအထားကို မိမိတို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့ လိုအပ်တယ်၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးပါတဲ့အေဂျင်စီ အတော်များများဟာ ဧရာမပျက်စီးခြင်းတွေ ဖြစ်နေတယ်အမှုထမ်းရေးရာ စွမ်းရည်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း အနှစ်မဲ့နေကြတယ်၊ မူဝါဒ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ မှေးမှိန်နေခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဘေးဖယ်ခံရခြင်း ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ဘိုင်ဒန်က ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ စစ်တပ်ကို ဖြန့်ချဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာကို သဘောမတူခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မာ့ခ်အက်စ်ပါကို ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့ သမ္မတထရမ့်က ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် ကာကွယ်ရေးဌာနကို သစ္စာခံတွေနဲ့ အားဖြည့်ခဲ့တဲ့ ထရမ့်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ သူ့အစိုးရသက်တမ်း နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်တွေမှာ ကသောင်းကနင်းတွေဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် သူ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေက ရှုမြင်ပြိး နိုင်ငံအတွက်လည်း စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
အမရေိကနျလုံခွုံရေးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့အဂေငျြစီတှဟော သမ်မတထရမျ့လကျထကျမှာ ဧရာမပကျြစီးခွငျး ဖွဈခဲ့တယျလို့ အမရေိကနျသမ်မတရှေးကောကျခံ ဂြိုးဘိုငျဒနျက ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။အမြိုးသားလုံခွုံရေးနဲ့ နိုငျငံခွားရေးဆိုငျရာ သူ့ရဲ့လကျထောကျတှနေဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီးနောကျ ဘိုငျဒနျက အခုလိုပွောခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အဖှဲ့ဟာ အာဏာအလှဲအပွောငျးလုပျရာမှာ ကာကှယျရေးဌာနအပါအဝငျ လုံခွုံရေးဌာနတှကေနေ လိုအပျတဲ့သတငျးအခကျြအလကျတှေ မရရှိခဲ့ဘူးလို့ ဘိုငျဒနျက ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။မစ်စတာဘိုငျဒနျဟာ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီ ၂၀ ရကျမှာ သမ်မတတာဝနျယူရမှာဖွဈပွီး သမ်မတထရမျ့ကလညျး နိုဝငျဘာရှေးကောကျပှဲမှာ သူအရေးနိမျ့ခဲ့တယျဆိုတာကို လကျခံဖို့ ငွငျးဆနျနဆေဲပါ။
နိုဝငျဘာ ၃ ရကျရှေးကောကျပှဲအပွီး ရကျသတ်တပတျအတျောကွာတဲ့အထိ ပုံမှနျအားဖွငျ့ သမ်မတအပွောငျးအလဲကာလမှာ ရရှိရမယျ့ အဓိကထောကျလှမျးရေးသတငျးတှေ ရရှိဖို့ ပိတျဆို့ခံထားရပါတယျ။ဒီဇငျဘာ ၂၈ ရကျက ဘိုငျဒနျရဲ့မှတျခကျြထှကျပျေါလာတဲ့နောကျ ယာယီကာကှယျရေးဝနျကွီး ခရစ်စတိုဖာ မီလာက သူ့အရာရှိတှဟော အကူးအပွောငျးလှုပျရှားမှုတှကေို အထောကျအကူဖွဈဖို့ အစှမျးကုနျပရိုဖကျရှငျနယျပီပီသသ လုပျကိုငျနကွေတယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ဘိုငျဒနျရဲ့အဖှဲ့က ကနဦးတောငျးဆိုထားတာထကျ အမြားကွီးကြျောလှနျပွီး ကာကှယျရေးဌာနက ဝနျထမျး ၄၀၀ ကြျောက တှဆေုံ့မှုပေါငျး ၁၆၄ ခုမှာ ပါဝငျခဲ့သလို စာမကျြနှာ ၅၀၀၀ လောကျရှိတဲ့ အထောကျအထားတှလေညျး ပံ့ပိုးခဲ့တယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပငျတဂှနျပွောခှငျ့ရသူတဈဦးကလညျး ဘိုငျဒနျအဖှဲ့နဲ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ ဆောငျရှကျနတေယျလို့ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ဘိုငျဒနျကတော့ နိုငျငံတျောလုံခွုံရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အဓိကအခကျြတှကေို ထှကျခှာတော့မယျ့အစိုးရဆီက မရတာမို့ ထရမျ့အစိုးရဟာ တာဝနျမဲ့တယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ဘယျလိုရှုပျထှေးမှုကိုမဆို အမရေိကနျရနျသူတှကေ အသုံးခနြိုငျတာကွောငျ့ ကမ်ဘာတဝနျးက အမရေိကနျတပျဖှဲ့တှရေဲ့ အနအေထားကို မိမိတို့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိထားဖို့ လိုအပျတယျ၊ နိုငျငံတျောလုံခွုံရေးအတှကျ အရေးပါတဲ့အဂေငျြစီ အတျောမြားမြားဟာ ဧရာမပကျြစီးခွငျးတှေ ဖွဈနတေယျအမှုထမျးရေးရာ စှမျးရညျနဲ့ စိတျဓာတျပိုငျး အနှဈမဲ့နကွေတယျ၊ မူဝါဒ လုပျငနျးစဉျတှေ မှေးမှိနျနခွေငျး ဒါမှမဟုတျ ဘေးဖယျခံရခွငျး ဖွဈနကွေတယျလို့ ဘိုငျဒနျက ဝဖေနျခဲ့ပါတယျ။
လူမြိုးရေးခှဲခွားမှု ဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွသူတှကေို နှိမျနငျးဖို့ စဈတပျကို ဖွနျ့ခဖြို့ တောငျးဆိုခဲ့တာကို သဘောမတူခဲ့တဲ့ ကာကှယျရေးဝနျကွီး မာ့ချအကျဈပါကို ရှေးကောကျပှဲပွီးတာနဲ့ သမ်မတထရမျ့က ဖွုတျပဈခဲ့ပါတယျ။အဲဒီနောကျ ကာကှယျရေးဌာနကို သစ်စာခံတှနေဲ့ အားဖွညျ့ခဲ့တဲ့ ထရမျ့ရဲ့လုပျရပျဟာ သူ့အစိုးရသကျတမျး နောကျဆုံးသီတငျးပတျတှမှော ကသောငျးကနငျးတှဖွေဈအောငျ ကွိုးပမျးမှုအဖွဈ သူ့နိုငျငံရေးပွိုငျဘကျတှကေ ရှုမွငျပွိး နိုငျငံအတှကျလညျး စိုးရိမျနကွေပါတယျ။
Previous Article အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်း ဗီယက်နမ်လို ဆန်ထုတ်တဲ့ ATM စက်တွေ တပ်ဆင်မယ်
Next Article အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ၁၆၈၀၀၀ ကျော်ကူးစက်ခံရ